Akwụkwọ ikike & Service Atumatu - Aquagem Pool mgbapụta Frequency Inverter
WARANTII & ọrụ atumatu
Aquagem ikike na mbụ purchaser na ngwaahịa kpuchie nta a na akwụkwọ ikike okwu eme ihe emeputa nkọwa ga-free si ntụpọ na rụọ na ihe maka oge nke abụọ (2) afọ site na ụbọchị nke mbụ echichi. Maka akwụkwọ ikike ọrụ, ị ga-mkpa-enye ihe àmà dị otú ahụ dị ka, ma na ọnweghị oke, ụbọchị nke mbụ zuo, echichi ụgwọ, ọrụ ụgwọ, oyiyi nke echichi na ntụpọ, Oghere Usoro ọgụgụ wdg
The ụdị / ụdị kpuchie n'okpuru Aquagem si akwụkwọ ikike na-agụnye: Gemstar VS; Gemflow VS;
Akụkụ ahụ mapụtara amụma
1. Ọ bụrụ na pụrụ iche iji ma ọ bụ ego nyere, Aquagem rịọ maka onye ọ bụla zuru akpa iji 1% nke Free-nke-n'Aka akụkụ ahụ mapụtara.
2. N'okpuru akwụkwọ ikike okwu, bụrụ na nke akụkụ ụkọ maka emeputa nkwarụ ọrụ, Aquagem ga-enye FOC akụkụ.
Original purchaser ga ịbụ maka mbupu na-eri.
3. akụkụ ahụ mapụtara (ma ọ bụ ngwaahịa) mgbanwe ndị nanị maka akụkụ (ma ọ bụ ngwaahịa) na ị natara na a emeputa metụtara ntụpọ ma ọ bụ mebiri emebi ọnọdụ ma ọ bụ mgbe a dị iche iche akụkụ (ma ọ bụ ngwaahịa) karịa ihe i nyere n'iwu na-ọhụma zitere gị.
4. Mbupu na njikwa bụ ndị na-abụghị refundable na akụkụ (ma ọ bụ ngwaahịa) mgbanwe gwụla ma ị natara a mebiri emebi ngwaahịa ma ọ bụ na-ezighị ezi ngwaahịa zitere gị, nke ikpe na anyị ga-akwụ ụgwọ nloghachi mbupu na-eri.
5. Exchange nke akụkụ (ma ọ bụ ngwaahịa) na Aquagem achọ tupu ihu ọma site email na manger@aquagem.com.cn
6. Ọ bụrụ na ị na-alọghachikwute a akụkụ ma ọ bụ a ngwaahịa na-Aquagem, biko ziga gị na-achọ tupu ihu ọma site email
Iji manager@aquagem.com.cn na-egosi na ihe mere maka nloghachi.
Mbukota na-ezipụ gị Laghachi:
6.1. Abịa ihe na ya mbụ nkwakọ ngwaahịa na zipu tinyere a oyiri nke mbukota ileghara (nnata) na ntukwasi-obi na a igbe.
Gị iji nọmba ma ọ bụ akwụkwọ ọnụahịa ọnụ ọgụgụ ga-gụnyere na nloghachi.
6.2. Send nloghachi ngwugwu:
5th n'ala, C6 ụlọ, Nanlong Industrial Mpaghara, Panyu
6.3 Anyị nwere ike ikwu na ị na-eji a shipper na nnyefe nkwenye iji hụ na gị ngwugwu na-natara.
Edochi anya N'OKPURU WARANTII
Ọ bụrụ na ị kwere gị Aquagem ngwaahịa na-ntụpọ n'oge akwụkwọ ikike mgbe, biko kọntaktị Nkwado Ndị Ahịa site na ekwentị na (20) 3781 4527 ma ọ bụ site email na manager@aquagem.com.cn maka akwụkwọ ikike nnọchi ma ọ bụ laghachi ikike.
An Aquagem nnọchiteanya ga-kpọtụrụ gị iji chọpụta ma na ikike akwụkwọ ikike ndochi.
Ọ bụrụ na ikike, Aquagem ga agbanweta ngwaahịa enweghị ụgwọ. Aquagem ga ụgbọ mmiri a nnọchi ngwaahịa unu, ibu akwugo ugwo ma ọ bụ iji zipu na-esote Mbupu gị. Ị na-ahụ maka na ntukwasi-obi mbukota ndị gahiere agahie ngwaahịa na-alọta ya Aquagem n'ime iri (10) na-arụ ọrụ ụbọchị nke nnata nke nnọchi ma ọ bụrụ na rịọrọ site Aquagem. Aquagem achọ a debit ma ọ bụ nọmba kaadị iji nwetara ndị na-eri nke nnọchi ngwaahịa na ihe omume ahụ na ị na-ada ka ha laghachi na ntụpọ otu. Ị na-ahụ maka eziga kwa afọ quality akụkọ Aquagem eji akụkọ tebụl nyere site Aquagem site ọgwụgwụ nke June kwa afọ depụtara niile rụpụta ntụpọ ikpe ma ya ngwọta.
The item dochie na-aghọ ihe onwunwe nke Aquagem. Nnọchi ngwaahịa nwere ike ịbụ ọhụrụ ma ọ bụ refurbished na Aquagem ọkọlọtọ nke àgwà, na, na Aquagem si nhọrọ, pụrụ ịbụ ihe ọzọ nlereanya nke ka ụdị na àgwà. Aquagem si ibu n'ihi nnọchi nke ekpuchiri ekpuchi ngwaahịa ga gafere ngwaahịa mbụ retail price. Gbanwere ngwaahịa iche fọdụrụ akwụkwọ ikike oge nke gị mbụ ngwaahịa kpuchie a akwụkwọ ikike.
Nke a akwụkwọ ikike na-ekpuchi naanị nkịtị were. Nke a akwụkwọ ikike abụghị nyefee. Aquagem bụ bụghị maka akwụkwọ ikike nnọchi kwesịrị Aquagem labelụ ma ọ bụ logo-ewepụ ma ọ bụ kwesịrị ngwaahịa na-kwesịrị ekwesị nọgidere na-enwe ma ọ bụ na-arụ ọrụ nke ọma dị ka a n'ihi nke n'ụzọ, mmetọ, imikpu na mmiri, na-ezighị ezi echichi, na-eleghara anya, na-ezighị ezi na mbupu, mmebi mere site ọdachi ndị dị otú ahụ dị ka ọkụ, iju mmiri ahụ, ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ karịa site na Aquagem.
IHE WARANTII NA usọbọ nyere n'elu bụ Nanị NA NA lieu niile ọzọ gosiri ọ bụ, ikekwe warranties gụnyere, mana na-ejedebeghị na, na echiche warranties OF MERCHANTABILITY, na-abụghị ịda iwu OR mma maka otu nzube. ỤFỌDỤ iwu Ekwela ka ịchụso ihe echiche warranties. Ọ BỤRỤ na iwu ndị a tinye, ahụ niile gosiri na ọ bụ, ikekwe warranties DỊ nanị WARANTII N'OGE MATA n'elu. Ma kwuru n'isiokwu a, ọ bụla e kwuru OR oyiyi mere BỤLA ọzọ ma ọ bụ IKE DỊ chakoo. Ma e wezụga dị nyere A dere WARANTII, AQUAGEM agaghi-dara iwu maka Ọ BỤLA ọnwụ, mgbaka, ma ọ bụ mmebi, gụnyere Direct, AKPAN, a na-enwe OR ndị dị emebi, n'ihi iji ma ọ bụ enweghi ike iji AQUAGEM ngwaahịa, MA n'ihi iro nke akwụkwọ ikike OR ọ bụla ọzọ gbasara iwu Theory.
Ụfọdụ meworonụ-adịghị ekwe ka na-agaghị emeli na-esi ruo ogologo oge kwuru pụtara akwụkwọ ikike dịruru, na ụfọdụ meworonụ adịghị ekwe ka mwepu ma ọ bụ mmachi nke a na-enwe ma ọ bụ ndị dị emebi, otú ahụ n'elu na-agaghị emeli na exclusions nwere ike adịghị emetụta gị. Nke a akwụkwọ ikike na-enye gị pụrụ iche iwu ikike na ị nwere ike na ndị ọzọ ikike nke iche site ikike na ikike.
Nanlong Industrial Mpaghara, Panyu,